"Olee otú ihichapụ kpam kpam songs si iPhone? Ọ enye m nsogbu n'obi nke ukwuu nke na mgbe upgrading ka iOS 7, ọtụtụ nke na-achọghị songs-egosi na m iPhone. M nwere ike ghara ihichapụ ha. Biko, nyere." - Sophia
Mgbe upgrading iOS, ụfọdụ ntọala mbụ na gị iPhone nwere ike ga-agbanwe. Na nke a, ụfọdụ songs ị zụrụ dị nnọọ yiri ka-egosi na gị iPhone enweghị gị-atụ anya. Ọ bụ a na-enwekarị nsogbu na ọtụtụ ndị okosobode. Echegbula. Ndị na-esonụ akụkụ na-agwa gị otú ị ihichapụ kpam kpam-achọghị songs si gị iPhone. Ị nwere ike ide otú a ma ọ bụrụ na ị na-ezute otu nsogbu mgbe ị upgrading ka iOS 9/8. Lelee ngwọta n'okpuru.
Nzọụkwụ 1 gbanyụọ iTunes egwuregwu
Enweta 'Ntọala' na gị iPhone n'ụlọ ihuenyo> mgbata 'iTunes & App-echekwa', pịgharịa gaa na ala iji chọta nhọrọ 'iTunes egwuregwu'. Swipe bọtịnụ n'akuku ya ka anya ma ọ bụrụ na ọ na-nyeere. Ọ bụrụ na ị na-adịghị gbanyụọ iTunes egwuregwu, ọ ga-akpaghị aka download songs gị iPhone.
Nzọụkwụ 2 Gbanyụọ 'Gosi All Music'
Ụfọdụ songs egosi na Music ngwa na obere ígwé ojii icon n'akụkụ? Ok, ma ọ bụrụ na otú ahụ, ị ​​mkpa gbanyụọ 'Gosi All Music'. Pịa iji 'Ntọala' ngwa> pịgharịa gaa na ala na enweta 'Music' ngwa> Swipe 'Gosi All Music' ka anya.
Nzọụkwụ 3 Nhichapụ songs si iPhone
Mepee Music ngwa gị iPhone. Na ala, enweta Songs. Chọpụta a song ị chọrọ iji wepu, swipe si ikike hapụrụ aka Nhichapụ nhọrọ. Enweta 'Hichapụ'.
Top 12 iPod ka iTunes ma ọ bụ Computer Nyefee Software
> Resource> Ihichapu> Olee ihichapụ kpam kpam Songs si iPhone